Al-Shabaab Oo Soo Bandhigtay Sawirrada Weerarkii Lagu Qaaday Xerada Baar Sanguuni [Daawo]
Ciidamada Maamulka Koonfur galbeed oo faarujiyay deegaanka Goofguduud Buureey.
Kumanaan qof Itoobiyaan ah oo ku jira xaalad go'doon ah iyo digniin lasoo saaray [Warbixin].
Kooxo burcad ah oo dalka Koonfur Afrika ku dilay ganacsade Faarax Weyd.
Markab Shamiinto sida oo qarka usaaran in uu ku dego Marsada Boosaaso.
Xarunta Keydka Daawooyinka dalka Jabuuti oo gubatay.
Xaalad deg deg ah oo ka dhalatay qaraxii qarniga ee ka dhacay wadanka Lubnaan.
Saturday January 19, 2019 - 19:56:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
(Rating 1.0/5 Stars) Total Votes: 2
Maktabka warfaafinta ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa goordhow baahiyey sawirrada weerarkii aroornimo ee saaka lagu qaaday saldhigga ciidamada Jubbaland iyo kuwa Federalka ee deegaanka Baar-Sanguuni.
Maktabka ayaa faafiyey sawirro hordhac ah oo muujinaya dagaalyahanada Al-Shabaab ah oo xoog ku jiiraya difaacyada askarta Mareykanku tababaray islamarkaana si buuxda gacanta ugu dhigaya Xerada.
Waxaa la arkayaa holac iyo uuro ka baxeysa xerada, Meydadka askar daadsan goobihii lagu dagaalamay, iyo dagaalyahanada Al-Shabaab oo hub iyo saanad ciidan ka daabulanaya saldhigga.
Taliska ciidanka Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkaas lagu dilay ugu yaraan 41 askari, laguna soo ganiimeystay gaari Cabdi Bile ah oo ku rakibnaa qori dhashiike ah iyo saanad ciidan oo hub iyo agab military u badnaa.
Sarkaal u hadlay Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadii ka bad-baaday weerarka oo isku dayey in ay u baxsadaan dhanka Buula-Gaduud iyaguna lala eegtay qarax gaari oo lagu diyaariyey wadada dhinaceeda.
Sawirradan uu baahiyey Xafiiska Wrfaafinta ee Xarakada Al-Shabaab ayaa imaanaya iyadoo maanta saraakiil u hadlay maamulka ‘Jubbaland’ ay dafireen in laga qabsaday xerada, lagana dilay askar fara badan.
Halkaan Ka Daawo Sawirada
Askari Kenyaan ah oo lagu dilay Wajeer iyo weerar askar lagu dilay oo Sh/hoose ka dhacay
Hormuud Telecom oo sanadkii 2aad qaaday Imtixaanka Deeqda Waxbarasho (Sawirro).
Baarlamaanka Itoobiya oo digniin udiray ismaamul goboleedka Tigreega.
Sawirro: Askari Mareykan ah oo ka hadlay Saskii uu ka qaaday duullaankooda Soomaaliya.
Saldhigyo ay ciidamada Kenya ku leeyihiin Jubbada Hoose oo weeraro lagu miray.
Nin Nabinimo sheegtay oo lagu dhax dilay maxkamad kutaal dalka Pakistan.
Mareykanka iyo dowladda Farmaajo oo sheegtay Mas'uuliyadda Carruurtii lagu xasuuqay degmada Jilib.
Al-Shabaab Oo Ka Tacsiyeeyay dilkii Sheekh Abil Qassaam Al-Urduni [Bayaan].
Baarlamaanka Turkiga oo ansixiyay Qaanuun ogolaanaya faafreeb lagu sameeyo baraha bulshada.